सरकारले राष्ट्रियताको विषयमा सौदावाजी गर्न खोजेको छ : सिंह – NepaliEkta
2870 जनाले पढ्नु भयो ।
हालै भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामान्तकुमार गोयललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कूटनीतिक मर्यादा विपरित भेटेका छन्, यो विषयलाई नेकपा (मसाल) ले कसरी हेरेको छ ?
यो पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीले भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुखसँग गोप्य भेट गर्नुको अर्थ राष्ट्रियताको प्रश्नमा कुनै सौदावाजी गर्ने त होइन ? त्यो प्रश्न उठाउने ठाउँ छ । त्यसको साथसाथै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवादमा भारतले खेल्ने प्रयास गरेको अनुमान पनि गर्न सकिन्छ । नेकपामा ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन भइरहेको प्रयासलाई भारतले प्रयोग गर्न खोजेको सन्दर्भमा ओलीले आफूलाई भारतको नजिक देखाउन पनि यो भेट गरेको संभावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । पहिले नेकपा भित्र ओलीलाई हटाउन तीब्र संघर्ष चलिरहेको बेलामा उनले –ओलीले) शेरबहादुरसँग भेटेर आफ्नो सत्ता जोगाउन खेल खेलेजस्तै अहिले पनि उनले आफ्नो सत्ता टिकाउन देशको राष्ट्रियतासमेत सित सौदावाजी गरेर भारतसित सम्बन्ध बनाउन खोजेको त होइन ? त्यतातिर पनि ध्यान नदिइकन रहन सकिन्न । ओली सरकारले त्यसप्रकारको कुनै प्रयत्न गरेमा त्यो उनको संगठन र स्वयं नेकपाका लागि पनि आत्मघाति हुने कुरा निश्चित छ । भारतीय साम्राज्यवादले उनको (ओलीको) भयदोहन गरेर पुनः उनलाई अपदस्त गर्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न ।
भारतले आधा शताब्दिभन्दा पहिलेदेखि नै नेपालका कतिपय भूभाग अतिक्रमण गरिरहेको छ र हामीले अन्य कैयौं वामपन्थी शक्तिहरुसित मिलेर त्यसका विरुद्ध संघर्ष गर्दै आएका छौं । अहिले सरकारले नेपालको नयाँ नक्सामा अतिक्रमित भूभाग समेटेर प्रकाशन गरेको पनि देशमा लामो समयदेखि चल्दै आएको त्यसका संघर्ष र जनदवाब, जसभित्र नेकपा भित्रकै दबाव पनि सामेल छ, त्यसको परिणाम हो । अहिलेसम्मका सरकारहरुले यति पनि गर्न सकिरहेका थिएनन् । त्यो पृष्ठभूमिमा ओली सरकारको कदमलाई हामीले सकारात्मक रुपमा नै लिएका छौं र त्यसको स्वागत पनि गरेका थियौं । कालोपानी क्षेत्रको भूमी फिर्ता लिने कार्य पनि जनताको व्यापक दबाब विना सम्भव हुने छैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट र दृढ मत छ । हाम्रो यो पनि स्पष्ट मत छ कि कालापानी क्षेत्रको अतिक्रमित भूमि भारतले सजिलैसित फिर्ता दिने छैन र त्यसका लागि हामीले कडा र लामो संघर्ष गर्नुपर्नेछ । भारतको कोशिस यो हुनेछ कि नेपालले आफ्नो अडान छाडोस् र त्यो क्षेत्रमा भारतको स्वामित्वलाई स्वीकार गरोस् । अहिलेको रअ प्रमुखको यात्राको उद्देश्य ओली सरकारको भयदोहन गरेर उनलाई त्यसका लागि तयार पार्ने त होइन ?
हामीले स्पष्टरुपमा भनेका छौं, कालापानीेको मुद्दालाई सरकारले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । त्यसलाई संयुक्त राष्ट्र संघ वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजानु पर्दछ र त्यसका पक्षमा विश्व जनमत ज्ुटाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । तर सरकारले त्यता ध्यान दिइरहेको छैन । नेपाल सरकारको जोड खालि भारतसित वार्तामा मात्र छ तर त्यो वार्ताप्रति पनि भारत सरकारले ध्यान दिइरहेको छैन । अब त्यसरी कुटनीतिक र आधिकारिक रुपमा वार्ता गर्नुको सट्टा भारत सरकारले चोर ढोकाबाट नेपाल सरकारलाई झुकाउने प्रयत्न गरिरहेको त छैन ? अन्यथा सामान्य तरिकाले भारतले सहजै नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने छैन । त्यसका लागि हामीले दबाब दिने काम गरिरहेका छौं । जनस्तरबाट यो दबाबलाई थप बढाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता छ ।
प्रशंग बदलौं, अहिले नेपालीहरुले दसैँ मनाइरहेका छन् । चाडपर्वप्रति यहाँहरुको दृष्टिकोण के हो ? संक्षेपमा बताइदिनुहोस् न ।
चीनमा मनाइने ओपेरा नृत्य, जसलाई हामी ‘रातो लालटिन’ भन्छौं, त्यो त्यहाँको सामन्तवादी समयको परम्परा हो । तर, चीनको महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको क्रममा त्यसलाई क्रान्तिकारी रुपमा प्रयोग गरिएको छ । हामीकहाँ मनाइने विभिन्न चाडपर्वलाई पनि हामीले. त्यसरी नै समाज परिवर्तनका लागि उपयोग गर्न सक्छौँ । त्यसैगरी अन्य चाडपर्वमा रहेको धार्मिक पक्षलाई छोडेर सामाजिक पक्षको उपयोग गर्दै समाज रुपान्तरणका लागि प्रयोग गर्नुपर्दछ । वास्तवमा धर्मले जीवनसित जोडिएका सबै विषयहरुमा धार्मिक रुप दिएको छ । पानी, आगो, वायू, पृथ्वी, दूवो, वरपीपल, गाई, अन्न आदि सबैलाई धार्मिक रुप दिने प्रयत्न गरेको छ । तर त्यो कारणले हामीले ती सबैलाई अस्वीकार वा बहिष्कार गर्न सक्दैनौं । हामीले ती सबैसित जोडिएका धार्मिक मान्यता वा अन्धविश्वासहरुलाई अस्वीकार गर्दै भौतिक वा सामाजिक रुपमा तिनीहरुलाई उपयोग गर्ने गर्दछौं । त्यही कुरा विभिन्न चाडवाडहरुका सन्दर्भमा पनि सत्य हो ।
← भारतमा नेपालीहरुको दशैंं
कुवेतमा नेपाली युवतीको हत्या →
18 December 2019 10 July 2020 Nepaliekta 0
3215 जनाले पढ्नु भयो । बुटवल । जातीय समता समाजको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । फागुन ८ र
23575 जनाले पढ्नु भयो । अजय रेश्मी फरीदावाद, १४ फरवरी । मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज अन्तर्गत रहेको
7835 जनाले पढ्नु भयो । धर्मराज शर्मा कोट्टयाम केरला, २१ फेबु्रवरी । मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज कोट्टयाम
9495 जनाले पढ्नु भयो । खिमराज चालिसे (चंडिगढ) बाहिर क्रान्तिकारी, भित्र स्वार्थको भकारी हुन्छ। त्यो नै वर्गीय आन्दोलनमा अवसरवादी हुन्छ।।
3147 जनाले पढ्नु भयो । हैदरावाद (भारत) ।। स्वर्गद्वारी नगरपालिका तापा–७ प्युठान घर भई हाल दाङ भालुवाङको पिपरीमा बसोबास गर्दै